एकैपटकमा सबै परिवारको आईपीओको नतिजा कसरी हेर्ने ? यस्तो छ तरिका।
आजभोली प्रविधिको जमानामा एक एक गरि आईपीओको नतिजा हेर्न कसलाई पो अल्छी लाग्दैन होला र ?
अझ घरको सबैको आईपीओको नतिजा एक एक गरि हेर्दा पनि आईपीओ नपरेपछि त् झन दिक्कनै लाग्ने हुन्छ । अझ बारम्बार डिम्याट नम्बर टाईप गर्नु पर्दा धेरैलाई झन्झट लागेकोहुन सक्छ। कतीपयलाई सबै आईपीओको नतिजा एकैपटकमा हेर्न पाए कति सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको होला।
तर हामि सबैको समस्या शेयर हब एपले समाधान गरेको छ। शेयर हब एप देखि तपाइले एकै पटक परिवारको सबैको आईपीओको नतिजा हेर्न सक्नु हुन्छ। अझ राम्रो कुरा त् के छ भने एपमा एकपटक सबैको डिम्याट नम्बर सेभ गरेपछि बारम्बार हाल्नु पर्दैन। एपमा एकपटक डिम्याट नम्बर सेभ गरेपछि सबैको नतिजा एक क्लिकको भरमा पाउन सक्नु हुने छ।
शेयर हब एप देखि कसरि हेर्ने नतिजा :